२०७४ पौष २ आइतबार, झापा । बिर्तामोड १ मा रहेको बिर्ता आयुर्वेद एण्ड फिजियोथेरापी सेन्टरले बिर्तामोड मै पहिलो पटक नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको छ । सेन्टरले शनिबार पुरानो खोकी ,पिनास, पाइल्स, सुगर छाती दुख्ने लगायत समस्याको डाक्टर निलकण्ठ उपाध्ययबाट नि:शुल्क जाँच तथा परामर्श सेवा प्रदान गरेको थियो । भने फिजियोथेरापिस्ट डा. दिपेन्द्र यादवले प्यारालाइसिस,नशा च्यापिएको,हाडजोर्नी दुख्ने झमझमाउने आदि समस्याको फिजियोथेरापीको माध्यम द्वारा उपचार तथा परामर्श दिएका थिए । ... बाँकी अंश»
स्वास्थ्य परिषद्ले ५० शय्याको सामुदायिक अस्पताल बनाउने
२०७४ पौष १ शनिबार, काठमाडौं । डल्लु आवासस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद्ले ५० शय्याको सामुदायिक अस्पताल बनाउने भएको छ । ... बाँकी अंश»
डा. झा युरोपियन सोसाइटी फेलोसिपबाट सम्मानित
२०७४ मङ्सिर २८ बिहिबार, वीरगन्ज । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत डा. राकेश झालाई युरोपियन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी इडस्कोपी ... बाँकी अंश»
कानून विपरित विपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको सिनेट बोलाउन मन्त्री बोहोराको दबाब
२०७४ मङ्सिर २८ बिहिबार, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहोराले नियम विपरित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बोलाउन दवाव दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
गगन थापाको पहलमा पाँचथरमा बन्नलागेको ५० शैयाको अस्पताल शिलान्यास
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, पाँचथर । पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा निर्माण हुन लागेको ५० शैयाको जिल्ला अस्पतालको भवनको मंगलबार शिलान्यास गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२ करोड भ्रष्टाचारमा सलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकी निमित्त सचिव डा.पुष्पालाई कार्वाहीको माग
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी निमित्त सचिव एवं प्रसूति गृहकी पूर्व निर्देशक डा.पुष्पा चौधरीलाई २ करोड रुपैया बढी अनियमितता गरेको भन्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्वाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । डा.चौधरी प्रसूति गृहको निर्देशक हुदा कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा ... बाँकी अंश»
आगोले पोलेका राउटे युवकको उपचार हुँदै
२०७४ मङ्सिर १४ बिहिबार, दैलेख । आगोले पोलिएका राउटे युवक कपिल शाहीको दैलेख जिल्ला अस्पतालमा अहिले उपचार भइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
सेती अञ्चल अस्पताल ३ सय शैयाको हुने, पहलकदमी लिने आरजुलाई धन्यवाद
२०७४ मङ्सिर ९ शनिबार, धनगढी । सकारले धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ । ... बाँकी अंश»
रिन्यू नगरी संचालित डेण्टल क्लिनिक र औषधि पसलको कारोबार बन्द
२०७४ मङ्सिर ९ शनिबार, नेपालगञ्ज । बजार अनुगमन टोलीले नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिरहेकोे नेपालगञ्जका एक औषधि पसल र एक डेण्टल क्लिनिकको सेवा तथा कारोबार बन्द गराएको छ । ... बाँकी अंश»
गगन थापाको पालामा स्विकृत बागलुङका २ प्राथमिक अस्पताल बन्ने प्रक्रिया शुरु
२०७४ मङ्सिर ७ बिहिबार, बागलुङ। बागलुङमा यस वर्ष पैयुँपाटा र ग्वालीचौरमा प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पताल सहित ११ वटा नयाँ स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण हुने भएका छन । ... बाँकी अंश»
विमलेन्द्र निधि श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पताल भर्ना
२०७४ मङ्सिर ४ सोमबार, काठमाडौँ । छातीमा समस्या देखिएपछि नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि सोमबार राजधानीको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ कार्तिक २८ मंगलबार, काठमाडौँ । मधुमेहका कारण प्रत्येक १० मध्ये एकजना महिला मधुमेहका बिरामी हुने बताइन्छ । ... बाँकी अंश»
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानले सुरु गर्यो द्वन्द्वपीडितको लागि निः शुल्क उपचार सेवा
२०७४ कार्तिक २८ मंगलबार, काठमाडौँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानले द्वन्द्वपीडितको लागि निः शुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ... बाँकी अंश»
सस्तोमा औषधि किन्ने गगनको प्रयास सफल, कार्यान्वयनको लागि निर्देशन
२०७४ कार्तिक २७ सोमबार, काठमाडौं । सरकारले काँग्रेस नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री बन्दा गरेका गरेको सस्तोमा औषधि किन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । ... बाँकी अंश»
सर्वसाधारणका लागि पहिलो पटक खुल्यो नेपाल प्रहरी अस्पताल
२०७४ कार्तिक २६ आइतबार, काठमाडौँ । महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
तेह्र जिल्लाका द्वन्द्वपीडितको पुनःस्थापना र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
२०७४ कार्तिक २६ आइतबार, जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले यही कात्तिक चौथो साताबाट १३ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित नागरिकका लागि पुनःस्थापना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शुरु गर्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»
डोटीमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा पनि स्वास्थ्य सेवा सुधारोन्मुख
२०७४ कार्तिक २५ शनिबार, डोटी । नेपाल सरकारले पदपुर्ति गर्ने दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भएपनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीमा ... बाँकी अंश»
२०७४ कार्तिक २४ शुक्रबार, काठमाडौँ । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ जारी भएसँगै निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने चिकित्सा ... बाँकी अंश»
हुम्लामा आँखा शिविर
२०७४ कार्तिक २४ शुक्रबार, हुम्ला। सदरमुकाम सिमीकोटदेखि दक्षिणी भेगमा पर्ने सर्केगाड गाउँपालिकाको हिमज्योति माविमा आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ । ... बाँकी अंश»
देउवाले ल्याएको चिकित्सा अध्यादेश प्रमाणीकरण, एमाले-माओवादीको जोर चलेन
२०७४ कार्तिक २४ शुक्रबार, काठमाडौं । लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । ... बाँकी अंश»